ဧရာဝတီ - ရုပ်/သံ: "Snr Gen Than Shwe Is Very Well" Says U Htay Oo
"Snr Gen Than Shwe Is Very Well" Says U Htay Oo
တော်သေးတာပေါ့။ သွားသင့်တာကြာပါပြီ။ သူမသွားတော့၊ နိုင်ငံရေးလည်း သွားသင့်သလောက်မသွားသေးပါဘူး။ သူသွားရင် ပြည်သူတွေလည်း ရှေ့တိုးသွားမှာပါ။ သူက လမ်းကြောင်းပိတ်နေတာ။ မီးနီ ဖြတ်ပြီး မင်းအောင်လှိုင်တောင် မမောင်းရဲသေးဘူး။ သိန်းစိန် လည်း သူ့ဟာသူ ဘာမှ လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိတာ မီးနီကြောင့်ပါ။ မီးစိမ်းပြချင်ရင်တော့၊ မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ သန်းရွှေ ကို ဖြုတ်မှ ရမယ်။ ဒါဆိုရင် ကချင်စစ်ပွဲလည်း ချက်ချင်း ရပ်သွားမှာပါ။
သူကဘာလိုတော.မှာလဲ သေမယ်.ရက်ကိုပဲစောင်.နေပြီလေ။ငွေမလိုရွှေမလို ဥစ္စာမလို ဘာကိုမှမလိုဘူး စားတာလဲ များလွန်းလို. ဗိုက်တောင်ဖောင်းဖောင်းကားကားထွက်လာနေပြီပဲ။
I don't think so Nai Htay Oo about you are talking, it is show to you change nothing. like the old style, still conservative. That sure asaleader of country with gun. What about now in Kachin state? if you have clear brain don't talk much, if you can't talk the politics. What system, what parliament? Nothing change from your mind.
Ko Ye Ni, when you ask him about U Than Shwe go out, what he said? i am not clear if you can tell me that mean please!